Christine Lagarde resigns as IMF chief, starting race for her successor
WASHINGTON - International Monetary Fund chief Christine Lagarde submitted her resignation from the global crisis lender on Tuesday, citing more clarity about her nomination to lead the European Central Bank as European legislators approved a new top bureaucrat. Lagarde said in a statement her resignation was effective Sept. 12, firing the starting gun for the IMF’s
Mareykanka oo Dadka Sharci Darada Ku Jooga Soo Qabqabanaya
Olole lagu baadi goobayo dadka magangalyo doonka ah ee sharci darrada ku jooga gudaha dalkan maraykanka ayaa laga bilaabay gobolada dalkan oo dhan Axaddii shalay. ...
Jawaabo kulul oo laga bixiyay hadal ka soo yeeray
Waxaa wali socota cambaareynta loo jeedinayo madaxwayne Donold Trump ka dib markii uu weerar dhanka afka ah ku qaaday 4 haween ah oo ka tirsan aqalka Kongreska Mareykanka. Koox haween ah oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa si carol eh uga jawaabay ka dib markii uu madaxwayne Trump uu sheegay in afartan xubnood ay tahay in ay ku laabtaan dalalkii ay ka yimaadeen. Siyaasiyiin
Hodan Naaleeye, geeridii gilshishay quluubta dad badan
Inta badan wararka laga soo tebiyo Soomaaliya waxay u badan yihiin warar ku saabsan dagaallo sokeeye, dagaallo dhexmaray maleeshiyaad, abaaro ama macluul balse Hodan Naaleeye wuxuu higsigeedu ahaa sidii ay usoo bandhigi laheyd horumarada ay gaareen shacabka iyo quruxda dalka. Dadaalkeedi wuxuu ahaa inay diiradda saarto dhiirogelinta da' yarta Soomaalida si ay dib ugu soo
ONLF: Qoriga waan dhignay, Qalinka ayaan ku dagaalameynaa
ADDIS ABABA, Ethiopia – Jabhadda xorreynta Ogaadeeniya ee ONLF ayaa xafiis cusub waxay ka furatay magaaladda Addis Ababa, caasimadda waddanka Itoobiya. Sidda ay sheegeen mas'uuliyiin u hadashay ururkaasi, xafiiskaasi ayaa ah mid ka shaqeyn doona arrimaha
Guddiga Olimbikada ee dalka Maraykanka ayaa raalligelin u jeediyay shacabka reer Brazil kaddib markii afar ciyaartooy Mareykan ah ay sheegeen been ahady in qori caaraddii lagu dhacay gudaha magaalada Rio ee dalkaasi Brazil. Guddigani ayaa sheegay in ay
Madaxweyne wiilkiisa u xushay shaqo muhiim ah
Jair Bolsonaro, madaxweynaha midigta fog ee Brazil ayaa wiilkiisa usoo bandhigay in uu noqdo safiirka Brazil u fadhiya dalka Maraykanka. Eduardo Bolsonaro oo 35 jir ah ayaa hadda ah xildhibaan ka tirsan Aqalka Congress-ka
Ra'iisul Wasaare shaaciyey sifooyinka lagu xusuusan doono Hodan
OTTAWA, Canada – Ra'iisul Wasaaraha Canada ayaa cambaareeyay weerar "bahalnimo ah" oo ay geysatay Al-Shabaab laguna dilay 26 ruux oo ay ku jirtay saxafiyad ku dhalatay Soomaaliya balse haysatay dhalashada Canada. Gabal-dhicii Jimcaha, qarax is-miidaamin oo lagu beegsaday huteel Madiina [Ex-Cascasey] ayna xigeen dabley gudaha gashay
Dhul-gariir laga dareemay badda ku beegan degaan ka tirsan Puntland
GAROWE, Puntland – Hay'adda Indho-indheysay qaab dhismeedka iyo muuqaalka dhulka ee Mareykanka ayaa sheegtay in Axadii dhul-ruxan uu ka dhacay waqooyi-bari ee Soomaaliya. Sidda ku xusan
Donald Trump oo banaanka soo dhigay fikradda xun ee uu ka qabo dalal ay ka ...
Inkasta oo xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Maraykanka uu yahay mid diiran, islamarkaasna uu sii kordhayo iskaashiga labada dal, ayaa haddane waxaa markii ugu horeysay soo baxaya fikradaha uu madaxweynaha Maraykanka ka qabo Soomaaliya. Inkasta oo uusan toos u magacaabin, haddane Donald Trump ayaa laga soo xigtay hadalo ay warbaahinta adduunka aad u faafisay oo uu
Dadkii caanka ahaa ee lagu laayay qarixii Kismaayo
Qarixii iyo weerarkii lagu qaaday Hotel Madiina (Ex Cascaseey) ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa ku dhintay wax ka badan 20 qof, 50 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Marka laga yimaado Hodan Naaleeye oo ahayd saxafiyad caan ah oo warbaahinta gudaha iyo dibeddaba ay si weyn geerideeda u hadal haysay, waxaa jira dad kale oo bulshada magac ku dhex lahaa. Maxamed Ismaaciil Shuuriye Waxa
Trump oo lagu dhaliilay takoor uu kula kacay xubno ay ku jirto Ilhaan
WASHINGTON, US – Madaxweynaha Mareykanka ayaa wajahaya dhaleeceyn guud markii uu weerar afka ah ku qaadey xubno ay kamid tahay gabdha asal ahaan Soomaaliga ah ee Ilhaan Cumar. Donald Trump oo adeegsanaya
Qaar ka mid culimada ayaa aad uga damqaday geeridii ku timid Hodan Naleyah oo ku geeriyootay qarax lala beegsaday huteel ku yaala magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland. Geeridii ku timid Hodan ayaa gilgishay quluubta dad badan. Culimada ayaa Hodan ku tilmaamay inay ahayd qof aad u wanaagsan oo bulshada Soomaaliyeed quluubta uga taalay. Qaar ka mid ah oo fariimo soo
Ethiopian Airlines oo bilowday duulimaadyada joogtada ee Puntland
GAROWE, Puntland – Shirkadda duulimaadka Itoobiya ayaa Isniinta maanta ah si rasmi ah u bilowday duulimaadyadda joogtada ah ee degaanada Puntland. Munaasabada soo dhaweynta oo ka qabsoontay garoonka
Trump wuxuu qaatay 'go'aan uu ku xumeynayo' Obama
Madaxweyanaha Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu ka baxay heshiiskii Nukliyeerka Iiraan si uu xumeeyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, sida laga soo xigtay macluumaad lasoo dusiyay oo uu qoray safiirkii Ingiriiska u fadhiyay Mareykanka ee dhawaan is casilay. Sir Kim Darroch ayaa waxaa uu ku tilmaamay tallaabada burburin dhanka diblumaasiyadda ah, sida laga soo
May oo cambaareysay hadalkii uu Trump ugu gafay Soomaaliya
LONDON, UK – Hadalhaynta ugu ballaaran ee caalamka oo idil ayaa waxay noqotay hadalo kasoo yeeray madaxweynaha Mareykanka kaasi oo mudaneyaal usoo jeediyey in ay dalkooda hooyo ku laabtan. Donald Trump ayaa si gaar ah
Axmed Madoobe iyo Ergayga UN-ka oo kawada hadlay doorashada
KISMAAYO, Jubbaland - Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta Aqalka Martida ee Magaalada Kismaayo ku qaabilay wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan iyo xubno kale oo ka socday Hay'adaha Qaramada Midoobay. Kulankan oo lagaga
Aragtida Xildhibaanada Baarlamaanka ee Heshiiska Labada Gole
Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay heshiiski ay dhawaan gudoomiyaasha labada aqal ee Golaha Shacabka ka heshiiyeen madmadowgi dhexdooda ka jiray. ...
Ethiopian Airlines commences direct flights to Puntland, Somalia
GAROWE, Puntland - Ethiopia's flag carrier Ethiopian Airlines (ET) has launched thrice-weekly direct passenger flights between Ethiopian capital Addis Ababa and Somalia's Puntland state on Monday, Garowe Online reports. Puntland President Said Abdullahu Deni, Vice President, Ahmed